Saiky nanaraka hatramin’ny ainy: lehilahy nanolana zaza 4 taona niharan’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Par Taratra sur 15/01/2019
Daroka, vono, angaredona… Voasambotry ny fokonolona ity tovolahy iray nanolana zazavavikely vao efa-taona monja, tany Tsiroanomandidy, ny alahady teo. Niharan’ny fitsaram-bahoaka ny anao lahy, ka saiky nanaraka hatramin’ny ainy raha tsy nalady tong any mpitandro filaminana.
Tratran’ny olona ny tovolahy iray nanolana zazavavikely vao 4 taona monja, tany Mangarivotra Tsiroanomandidy, ny alahady teo ka niharan’ny fitsaram-bahoaka. Araka ny vaovao avy any an-toerana, nitsoaka izy io raha vao tratra teo am-panaovana ny asa ratsiny ka raikitra ny fanenjehan’ny fokonolona azy. Voasambotry ny olona ary niharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Mafy ny daroka nahazo azy ary saika nanaraka hatramin’ny ainy raha tsy tonga ny mpitandro filaminana.
Nalain’ny polisy ilay lehilahy io ary nentiny nanaraka azy mba ho fiarovana ny ainy. Efa saika tsy nanaiky ihany ny olona, saingy rehefa noresena lahatra, nilamina ihany. Nametraka fitoriana avy hatrany ray aman-drenin’ilay zaza. Raha ny fanazavana azo, manambady ilay tovolahy mpanolana io. Tsy fantatra izay olany fa ilay zaza nanamparany ny filany no tratran’ny olona. Toe-javatra efa fanaony ihany koa anefa, ka izao sarona izao ny niafarany.
Sarotra ny fifehezana ny fitsaram-bahoaka
Anisan’ny sarotra, ary vao niandoha ity taona ity no efa nisehoana tranga fitsaram-bahoaka maromaro tamin’ny faritra ary anisany ity. Ny zandary nanome tatitra amin’ny ady amin’ny fitsaram-bahoaka. “Nidina dia nidina ny tranga mahakasika ny fitsaram-bahoaka raha ny tamin’ny taona 2018 no resahina noho ny ezaky ny zandarimaria sy ireo fandaharan’asa narahina fanentanana nataony, niarahana niasa tamin’ny Minisiteran’ny fitsarana sy ireo tomponandraikitra isan’ambaratongany tany amin’ny faritra Sava ,Sofia ary Antsinanana izay matetika nisehoan’izany tranga izany”, hoy ny fanazavana . Miisa 38 sisa ny tranga niseho raha 64 izany tamin’ny taona 2017; 38 ihany koa ny olona maty ary enina no naratra ka tsy nahitana tranga mahakasika ny mpitandro filaminana izany. Niditra am-ponja avokoa ireo olona 58 voasambotra mahakasika izany. Heverina fa mbola hihena, araka ny tatitry ny zandary izany, amin’ity taona ity, raha vao manomboka aza ny taona, efa ahitana tranga sahady.